नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : यो त अति भयो : अपराधीहरुको बुइ चढेर अति नगर केपी ओली !
यो त अति भयो : अपराधीहरुको बुइ चढेर अति नगर केपी ओली !
पूर्व निर्धारित संस्कृत सम्मेलन समापन समारोहमा सम्बोधनसमेत गर्ने तयारीसहित जाँदै गरेका कोइरालालाई १० जना प्रहरीको टोलीले विमानस्थलबाटै पक्राउ गरेको थियो। विमानस्थलमा समातिएका कोइरालालाई त्यहाँबाट
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा एक घन्टा नियन्त्रणमा राखिएको थियो।
पहिलोपोस्टका अनुसार उनले सहकुलपति (शिक्षा मन्त्री)मार्फत् कुलपति (प्रधानमन्त्री) कहाँ संस्कृत सम्मेलनमा सहभागी हुन जाने विदा स्वीकृतिका लागि पत्र पठाएको दावी गरे। 'सन् २०२४ मा नेपालमा विश्व संस्कृत सम्मेलन गर्ने तयारीसहित म जाँदै थिएँ,' उनले भने, 'कसैले म कांग्रेसी हुँ भनेर प्रधानमन्त्रीलाई भन्यो होला, उनले समात्न लगाए।'